China yanga ichipa rubatsiro kune dzimwe nyika kurwisa COVID-19 nechinangwa chega chekuyedza kuponesa vanhu vakawanda sezvinobvira, Kanzura weHurumende uye Gurukota rezvekunze VaWang Yi vakadaro neSvondo.
Pamusangano wevatori venhau wakaitwa padivi pechikamu chechitatu cheNational People's Congress, Wang akati China haimbotsvage zvido zvehupfumi hwenyika kuburikidza nerubatsiro rwakadaro, uye haibatanidzi tambo dzezvematongerwo enyika kune rubatsiro.
China yakaita mumwedzi mishoma yapfuura rubatsiro rwakakura rwepasi rose rwekubatsira vanhu kubva pakuvambwa kweChina nyowani.
Yakapa rubatsiro kunyika dzinenge zana nemakumi mashanu nemasangano mana epasi rose, yakaita misangano yevhidhiyo yekugovana kurapa kwechirwere uye ruzivo rwekudzora nenyika dzinopfuura 170, uye yakatumira zvikwata zvenyanzvi dzekurapa kunyika makumi maviri neina, sekureva kwaWang.
Yakatumirawo kunze mabhiriyoni makumi mashanu nematanhatu emamaki uye mamirioni mazana maviri nemakumi mashanu ezvipfeko zvekudzivirira kubatsira nharaunda dzepasi rose kurwisa denda iri, akadaro Wang, achiwedzera China yakamira yakagadzirira kuenderera mberi nekupa rubatsiro.
Nguva yekutumira: May-21-2020